असल छु भनेर पत्याउँदैन समाज! :: फर्सुराम पाण्डे :: Setopati
असल छु भनेर पत्याउँदैन समाज!
समाज मानिस-मानिसको एक समूह हो। समाज भित्र हामी सबै पर्छौँ। समाजले आफ्नै नियम बनाएको छ। हामी तिनै परिधिबाट सञ्चालित छौँ। यहीँ समाज र हाम्रो आफ्नै विवेकले के असल र के खराब भनेर छुट्टाएको छ। हुन त 'असल' शब्दको आफ्नै परिभाषा होलान् म यहाँ मेरो पर्सेप्सन मात्र लेख्दै छु।
समाजले बनाएको न्युनत्तम गाइडलाइन्सहरु मान्ने व्यक्तिलाई यस ब्लग भित्र असलको दर्जामा राखेको छु। आफ्नो बुबा-आमाको अगाडि लुकाउनुपर्ने कुरालाई असलको क्षेत्राअधिकार बाहिर राखेको छु। आफूले उक्त काम गरेको कुरा बुबा-आमालाई ढाट्न पर्यो भने त्यो काम असल हैन भन्ने दृष्टिकोणको मात्र यहाँ चर्चा गरेको छु।
अब बेलिविस्तारमा कुरा गरौँ। समाज गतिशील हुन्छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिलेको युगमा यसको गतिशीलता रफ्तारमा हिँडेको छ। यहीँ गतिशीलताले होला अहिले हाम्रो समाजले म २० वर्ष कटेको काठमाडौँमा बस्ने युवालाई जाड-रक्सी खान्न, गाजाँ-चुरोट समात्दिन, फेसबुकमा केटी देख्ने बित्तिकै दश वटा हाई-हाई लेखेको म्यासेज पठाउन्न वा केटीको चक्कर छैन भन्ने हो भने हाँस्छन् मान्छेहरु।
गलल हाँसेर 'जीवनमा के रमाइलो गरिस् त नि?' भन्ने प्रतिउत्तर आउँछ। तपाईं पत्याउनुस् नपत्याउनुस् उमेरले सोह्र नपुग्दै बियर पिउनु, साहसीको एक मात्र चाहना भन्दै चुरोट पिउनु, जानी-नजानी इङ्गलिश बोल्न खोज्नु, गल्फ्रेण्ड-ब्वाइफ्रेण्ड बनाउँदै लुकी-लुकी डेट जानु अहिलेको पुस्ताको फेसन हो। मैले यो काम गरेको छैन भन्ने हो भने पत्याउँदैन समाज। हामी कुनै मान्छे असल हुनसक्छ भन्ने पत्याउन छोडिसक्यौँ।
यो कुरा छोरी मान्छेको हकमा पनि लागु हुँदोरहेछ। एकजना मिल्ने केटी साथी भन्थिन् 'म गोरी, बाटुलो अनुहार भएकी कम्तीमा १८ वर्ष कटेकी छोरी मान्छे हुँ। त्यसैले यहीँ कारण म बहुसङ्‍ख्यक केटाको दिमागमा ब्वाइफ्रेण्ड छ यसको भन्ने परिसकेँ। मैले लगाउने कपडा र मेकअपले मलाई त्यस्तो देखाउँछ रे। समाजले मैले लगाउने कपडाको नेचरअनुसार कपडालाई माध्यम बनाएर मलाई जज गरिसक्छ।'
उनी केटा र केटीमा त अझ असलको परिभाषा नै फरक छ भन्थिन्। 'मेरा धेरै केटा साथीहरु छन्। सोही कारण म छोरामान्छेसँग हाँस्ने बोल्ने नेचरकी भएकोले म अविवाहित हुँदाहुँदै पनि भर्जिन हुँ भन्दा समेत अहिलेको समाजको एउटा खेमाले मलाई पत्याउँदैनन्' भन्ने गुनासो गर्थिन्। फेरि भर्जिन नहुनेहरु असल हुन्नन् भन्न खोजेको हैन। माथि परिभाषामा बुबा-आमाको अगाडि लुकाउन पर्ने कार्यलाई असलको क्षेत्राधिकार बाहिर राखेकोले यो कुरा उल्लेख गरेको मात्र हो।
'त्यसैले छोरीमान्छेलाई बोले पनि यस्ता आरोप आउँछन् नबोले फेरि खुब एटिच्युड भएकी भन्ने गुनासो हुन्छ,' उनले भन्छिन्।
हामी जुनसुकै कुरामा अत्यन्तै सस्तो टिप्पणी गरिदिन्छौँ। शंका मात्र पनि हैन प्रमाणित भए जसरी दाबी गर्छौँ। तपाईं अब यहीँ समाजको यो मेन्टालिटीको बेगसँग लुकी-लुकी भए पनि सवार गर्नु भो भने तपाईंलाई केही दुःख हुन्न। तर यदि तपाईं यहीँ परिवार र समाजले बनाएको अघिल्लो आदर्शको समाजको गाइडलाइन्सको असल हुनुन्छ भने तपाईंलाई पाइला-पाइलामा प्रश्न तेर्साइने छ।
तपाईंलाई आफ्नै नजिककै मान्छेलाई पटक-पटक प्रमाणित गर्दै हिँड्नुपर्छ, म सही छु भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना?
समाजको अहिलेको यो गतिमा हिँड्न नसक्ने मान्छे त अहिले सबैभन्दा बढी पीडित हो। न उसले छाँटेका आदर्शका कुरा कसैले पत्याउँछ न उसले ऊ आफूजस्तो मेन्टालिटी भएको साथी भेट्छ। उस्तै परे बढी भयो यसको आदर्श भनेर भएको गर्लफ्रेण्ड-ब्वाइफ्रेण्डले छोड्लान्। तर तपाईको मेन्टालिटी विरलै अबको बहुसङ्‍ख्यक युवा पिडीँको रोजाइमा पर्छ।
समाजको गाइडलाइन्स अझै पुरानै छ। तर युवा पिडीँको मानसिकता कहाँ पुगिसक्यो कहाँ? अब तपाईंको सोचाइ अत्यन्तै रुढीवादी करार भैसक्यो। तपाईं एउटा खेमाको लागि पाखे, रमाइलो गर्न नजानेको समाजसँग घुलमिल हुन नसक्ने असमाजिक वस्तु हो। हामी कसैले भोगेर बोलेको कुरा पत्याउदैनौँ तर झुटको लहलहैमा बगेर झुटलाई भने सत्य भनेर दावी गर्छौं।
हुन त एउटा संस्कृतको श्लोक 'यथा दृष्टि तथा सृष्टि' अर्थात् जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भनेजस्तो आफू र आफ्नो सर्कलअनुसार जस्तो देख्छौँ त्यस्तै वातावरण सोच्छौँ तर वास्तविकता त्योभन्दा धेरै टाढा छ भन्ने चेतना हुँदैन। यो कुरा ज्ञानबोध नभएको हैन तर पटक-पटक प्रमाणित गर्न पर्नुले कसैलाई दुःख दिन्छ भन्ने सोच्दैनौँ।
त्यसैले मेरो आशय तपाईं र तपाईंको सर्कललाई अर्को मान्छेसँग एउटै तुलोमा नराखियोस् भन्ने मात्र हो। मेरो कुरा जो कोहीलाई केही नबुझी कसैको विवेकमाथि सतही हल्का टिप्पणी नगरौँ भन्ने मात्र हो। हामीमा ऊ जे-जस्तो छ, इमान्दार होला नहोला, जे छ खुसी छ भन्नेमा विश्वस्त हौँ। उस्तैमा उसको जीवन चलेको छ, उस्तैमा रमाएको छ भन्ने चेतना राखौँ।
एउटाले कुनै व्यापारमा आघात पुर्यायो, तपाईंको जितमाथि डाह-ईर्ष्या गर्यो, प्रेममा धोका दियो वा दुःख दियो भन्दैमा संसारमा सबै छन्, संसार नै सेल्फिस छ भन्ने दाबी गर्न छोड्नुस्। त्यसैले संसारमा तपाईंको आफ्नै परिभाषा वा दृष्टिकोण अनुसारका असल मानिसको पनि बसोबास छ। अर्कोको अर्कैको परिभाषाका असल मान्छेको पनि बसोबास भन्नेमा पनि शंका नगरौँ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ८, २०७८, १५:११:००